Abụ m nkwupụta nke Jizọs - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Abụ m nkwupụta nke Jizọs
A bụ m nkwupụta - ka esi mata Jizọs n'ime Oziọma ndị ahụ
Mkparịta ụka na -ezighi ezi na ahịrịokwu Grik maka 'abụ m' (ego eimi)
Onye ìsì ahụ kwuru "Abụ m"
Gịnị banyere Jọn 8:24, 'Ọ gwụla ma ùnu kwere na m bụ, unu ga -anwụ n'ime mmehie unu'?
Gịnị banyere Jọn 5:58 - 'Tupu Ebreham adị, a bụ m'?
Gịnị banyere Jọn 13:19, 'Mgbe ọ ga -eme, ị nwere ike kwere na m bụ'?
Gịnị banyere Jọn 18: 4-8, 'Mgbe Jizọs sịrị, “Ọ bụ m”, ha lara azụ wee daa n'ala'?
Okwu ndị ọzọ "Abụ m" nke Jizọs n'Oziọma Jọn
Mgbe Jizọs jụrụ ndị na -eso ụzọ ya, “onye ka unu na -asị na m bụ?”, Nzaghachi ya bụ “Kraịst” (Mak 8:29), ma ọ bụ “Kraịst nke Chineke” (Luk 9:20), ma ọ bụ “Kraịst, Nwa nke Chineke di ndu ”(Matiu 16:16). “Kraist”, “Ọkpara Chineke” na “Nwa nke mmadụ” bụ otu okwu. N'ezie, Jizọs kọwara onwe ya dị ka “Ọkpara Chineke” na Luk 22:70, Jọn 10:36, na Matiu 27:43 na “Nwa nke mmadụ” na Mak 8:38, Luk 5:24, 9:26 , 12: 8, 22:48. Amaokwu ndị dị mkpa na Jọn bụ Jọn 4: 25-26, Jọn 8:28, Jọn 10: 24-25 na Jọn 20:31 ebe Jizọs kọwara onwe ya ma kọwaakwa ya dị ka “Kraịst,” “Nwa nke mmadụ,” na “Nwa Chineke”. Isi okwu nkwusa nke ndị ozi n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, site n'aka ndị Kraịst họpụtara, bụ na "Kraịst bụ Jizọs." Ekwughachiri nke a na Ọrụ 2:36, Ọrụ 5:42, Ọrụ 9:22, Ọrụ 17: 3, na Ọrụ 18:15.
(Mark 8: 29-30) Ị bụ Kraịst ahụ
Na ọ jụrụ ha, "Ma onye ka unu na -asị na m bụ?" Pita zara ya, “Ị bụ Kraịst. ” O nyekwara ha iwu ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla gbasara ya.
Luk 9: 20-22 (NIV), Kraịst nke Chineke-Nwa nke mmadụ
Mgbe ahụ ọ sịrị ha, "Ma onye ka unu na -asị na m bụ?" Na Pita zara, "Kraist nke Chineke. ” O we nye ha iwu nke -uku, nye ha iwu ka ha ghara igwa onye ọ bula ihe a, si,Nwa nke mmadụ aghaghị ịta ahụhụ nke ukwuu, ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ ga -ajụkwa ya, wee gbuo ya, a ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị nke atọ. ”
(Matiu 16: 15-20) Ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ
15 Ọ sịrị ha, “Ma onye ka unu na -asị na m bụ?” 16 Saịmọn Pita zara ya sị,Ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ. " 17 Jisus we za ya, si, Onye agọziri agọzi ka i bu, Simon Bar-Jonah! N'ihi na anụ ahụ na ọbara ekpugheghị gị nke a, kama Nna m nke bi n'eluigwe. 18 Ma asị m gị, ị bụ Pita, na nkume a ka m ga -ewu chọọchị m, ọnụ ụzọ ámá nke hel agaghị emeri ya. 19 M ga -enye gị mkpịsị ugodi nke alaeze eluigwe, ihe ọ bụla ị ga -ekekwa agbụ n'ụwa a ga -agbụ ya n'eluigwe, ihe ọ bụla ị tọpụkwara n'ụwa a ga -atọpụ ya n'eluigwe. ” 20 Ọ gwaziri ndị na -eso ụzọ ya ka ha ghara ịgwa onye ọ bụla na ọ bụ ya bụ Kraịst.
John 4: 25-26 (Mkpu), Mezaịa na-abịa-“mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya”
Nwanyị ahụ sịrị ya, "Ama m na Mezaịa na -abịa (onye a na -akpọ Kraịst). Mgbe ọ bịara, ọ ga -agwa anyị ihe niile. ” Jisus siri ya, Mu onwem Nke nāgwa gi okwu ọ bụ ya. "
John 8: 28 (Mb) Mgbe ị buliri Nwa nke mmadụ elu, mgbe ahụ ka ị ga -amata na ọ bụ m.
Ya mere, Jizọs sịrị ha:Mgbe unu buliri Nwa nke mmadụ elu, mgbe ahụ ka unu ga -amata na ọ bụ m bụ ya, ka m gharakwa ime ihe ọ bụla n'onwe m, kama na -ekwu ihe Nna m kụziiri m.
(Jọn 10: 24-25) Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gwa anyị-“Agwara m gị”
Ya mere ndi -Ju nāb gathereda Ya buruburu, we si Ya, Rùe ole mb youe ka I g keepme ka ayi nọ n'obi abua? Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gwa anyị hoo haa. ” Jisus zara ha, "Agwara m unu, ma unu ekweghị. "
JỌN 20:31 Edere ihe ndị a ka unu kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke
ma Edere ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, na site na ikwere, ị ga -enwe ndụ n'aha ya.
Ọrụ Ndị Ozi 5:42 (Ha akwụsịghị izi ihe na ikwusa na Kraịst bụ Jizọs)
Ọrụ 9:22 (NIV), na Jizọs bụ Kraịst ahụ
22 Ma Sọl na -agbasiwanye ike, na -agbagwojukwa ndị Juu bi na Damaskọs anya site n'igosipụta na Jizọs bụ Kraịst ahụ.
Ọrụ Ndị Ozi 17: 3, Jizọs a bụ Kraịst ahụ
3 na -akọwa ma na -egosi na ọ dị mkpa ka Kraịst taa ahụhụ wee si na ndị nwụrụ anwụ bilie, sị,Jizọs a, onye m na -ekwusara gị, bụ Kraịst ahụ. "
Ọlụ Ndị Ozi 18: 5 (Ọrụ Ndịozi XNUMX: XNUMX) Pọl nọ na akara ngosi, na -agbara ndị Juu àmà na Kraịst bụ Jizọs
5 Mgbe Saịlas na Timoti si Masedonia bịa, Pọl nọ na -ekwusasi okwu ahụ ike, na -agbara ndị Juu àmà na Kraịst bụ Jizọs.
Ọtụtụ ndị Kraịst na -agwa okwu Jizọs "abụ m", ἐγώ εἰμι (ego eimi) n'asụsụ Grik, nye Chineke na -ekpughere aha ya dị ka "ABỤ M BỤ" na Ọpụpụ 3:14. Agbanyeghị, ọgụgụ dị mfe nghọta nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ Agba Ọhụrụ nwere ἐγώ εἰμι na -egosi na nke a abụghị eziokwu. N'ezie, ọtụtụ amaokwu ndị nwere okwu a bụ "Abụ m" na -egosi ọdịiche dị n'etiti Jizọs na ịbụ otu Chineke Nna. Anyị ga -akpachara anya ka anyị ghara ịgụta ihe pụtara n'ime ibe ahịrịokwu na -abụghị ojiji ya. Ọ pụtara ìhè site na ntụnyere ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na iji ego eimi nke Jizọs na ndị ọzọ emeghị ka ya na Chineke kpughee aha ya na Ọpụpụ 3:14. Dịka ọmụmaatụ, Luk 24:39 mgbe Jizọs gosipụtara onwe ya mgbe a kpọlitere ya n'ọnwụ n'anụ ahụ ọ na -ekwu maka aka ya na ụkwụ ya na -asị, "ọ bụ mụ onwe m (ego eimi)," n'ụzọ dị iche na mmụọ na -enweghị anụ na ọkpụkpụ. Okwu “abụ m” nke ozioma Jọn ekwesịghị ka ya na Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile nwee njikọ. O doro anya na Jọn 20: 30-31, na “ihe ndị a ka e dere ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, na site na ikwere na unu ga-enwe ndụ n'aha ya.”
Luk 24:39 (Lee aka m na ụkwụ m) na ọ bụ m
Lenu akam na ukwum, na ọ bu I onwe m (ego eimi). Metụ m aka hụ. N'ihi na mmụọ enweghị anụ na ọkpụkpụ dịka ị hụrụ na m nwere. "
John 20: 30-31 (ESV), e dere ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke.
Ma Jisus mere ọtutu ihe -iriba -ama ọzọ n'iru ndi n disciplesso uzọ -Ya, nke an aredeghi n'akwukwọ a; mana Edere ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, na site na ikwere, ị ga -enwe ndụ n'aha ya.
ἐγώ εἰμι bụ naanị ahịrịokwu njirimara nke Grik. Ọ bụ ihe onye ìsì ahụ kwuru na Jọn ịkọwa onwe ya.
JỌN 9: 8-11 (Abụ m nwoke)
8 Ndị agbata obi na ndị hụrụ ya tupu dị ka onye arịrịọ nọ na -asị, "Onye a ọ bụghị nwoke ahụ nọdụrụ ala na -arịọ arịrịọ?" 9 Ụfọdụ sịrị, “Ọ bụ ya.” Ndị ọzọ sịrị, “Mba, mana ọ dị ka ya.” Ọ gara n'ihu na -ekwu, "A bụ m (ego eimi) nwoke ahụ. " 10 Ya mere ha siri ya, Thensi kwa a werea meghe anya -gi? 11 Ọ zara, “Nwoke ahụ a na -akpọ Jizọs mere apịtị, tee m mmanụ n'anya wee sị m, 'Gaa na Saịloam saa ahụ.' Yabụ Agara m saa anya m wee hụ ụzọ. "
Ụfọdụ Ndị Kraịst na -ekwusi okwu ike nke "Abụ m" nke Jọn 8:24 nke na -agụ, "Agwara m gị na ị ga -anwụ n'ime mmehie gị, n'ihi na ọ gwụla ma i kwere na m bụ (ἐγώ εἰμι) ị ga -anwụ n'ime mmehie gị." Agbanyeghị, Jizọs kọwara ihe ọ na -ekwu mgbe ndị Juu jụrụ, "onye ka ị bụ," ọ zara, "Ihe m na -agwa gị site na mbido." (Jọn 8:25). A kọwara Jizọs dị ka “Nwa nke mmadụ” ugboro asaa n’isiakwụkwọ ndị bu ụzọ. N'ime otu mkparịta ụka ahụ, Jizọs kọwara na Jọn 8:28 na -asị, "Mgbe ị buliri Nwa nke mmadụ elu, mgbe ahụ ka ị ga -amata na abụ m (ἐγώ εἰμι), na anaghị m eme ihe ọ bụla n'ike nke m, kama ikwu okwu. dị nnọọ ka Nna m kụziiri m. ” Yabụ, Jizọs na -ekwughachi n'ụzọ doro anya John 8: 24 ihe o kwuburu banyere onwe ya n'isiakwụkwọ ndị bu ya ụzọ bụ "Nwa nke mmadụ". N'ozuzu, a kọwara Jizọs ugboro iri na abụọ dị ka "Nwa nke mmadụ" n'akwụkwọ Jọn (Jọn 1:51, 3: 13-14, 5:27, 6:27, 6:53, 6:62, 8: 28, 9:35, 12:23, 12:27, 13:31).
(Jọn 8: 24-28) Ọ gwụla ma ùnu kwere na m bụ, unu ga-anwụ na mmehie unu
24 Agwara m gị na ị ga -anwụ n'ime mmehie gị, n'ihi na ọ gwụla ma ị kwere na m bụ ya ị ga -anwụ n'ime mmehie gị. " 25 So we si ya, Ì bu onye? Jizọs sịrị ha, “Naanị ihe m na -agwa unu site na mmalite. 26 Enwere m ọtụtụ ihe ikwu gbasara gị na ọtụtụ ihe m ga -ekpe ikpe, mana onye zitere m bụ eziokwu, m na -agwakwa ụwa ihe m nụrụ n'ọnụ ya. " 27 Ha aghọtaghị na ọ na -agwa ha gbasara Nna ya. 28 Ya mere, Jizọs sịrị ha: .
Sidney A. Hatch, A Journal from the Radical Reformation, Fall 1992, Mpịakọta. 2, Nke 1, 37-48
Enweghị njikọ dị n'etiti Ọpụpụ 3:14 na nkwupụta Jizọs. “Okwu abụọ a abụghị otu ma dị iche iche n'ọtụtụ ụzọ. Ọ dịghị mgbe Jizọs kwuru ego eimi ho on, “Abụ m onye dị adị,” dị ka LXX (Septuagint) si sụgharịa Ọpụpụ 3:14 n'ụzọ na -ezighi ezi. N'aka nke ọzọ, enwere ọtụtụ ihe akaebe na -egosi na okwu ego eimi bụ ihe a maara nke ọma na ọ bụ Mezaịa.
Edwin D. Freed, “Ego Eimi na John viii. 24 n'ìhè nke onodu ya na nkwenkwe Mesaịa nke ndị Juu, ”Journal of Theological Studies, 1982, Mpịakọta. 33, 163
Okwu mbụ pụtara na Oziọma Jọn na 1:20, ebe Jọn Baptist na -agọnarị na ọ bụ Kraịst: ego ouk eimi ho christos (“Abụghị m Kraịst”). Ọ pụtara ọzọ na 4:26 ebe, na nzaghachi n'okwu nwanyị Sameria ahụ na "Amaara m na Mezaịa (onye akpọrọ Kraịst) na -abịa" (4:25), Jizọs zara, ego eimi, ho lalon soi (“Abụ m, onye na -agwa gị okwu ”). Nke a bụ ntụnye maka ịghọta amaokwu ndị ọzọ niile ebe okwu ndị ahụ mere. A na -eji ego eimi eme ihe n'Oziọma Synoptic dị ka aha Mesaịa. Nkebi ahịrịokwu ahụ, 'Abụ m,' mgbe achọtara ya n'egbugbere ọnụ nke Onye nzọpụta, pụtara 'Abụ m Mesaya,' ọ bụghị 'Abụ m Chineke.' Ihe akaebe nke Akwụkwọ Nsọ megidere nkọwa ikpeazụ. Banyere Jọn 8:24, a tụrụ anya na Mesaya ga -abara ndị mmehie mba. “Ọ ga -abakwara ndị mmehie mba maka echiche nke obi ha” (Pss. Sol. Xvii. 25) Mgbe Jizọs kwuru ugboro atọ na ndị Juu ga -anwụ n'ime mmehie ha belụsọ na ha kwenyere na ego eimi, ọ na -eme naanị ihe Mesaya ahụ tụrụ anya ya. ime — baara ndị mmehie mba.
Ihe gbara amaokwu nke Jọn 8:56 bụ, “Nna gị Ebram nwere ọicedụ na ọ ga -ahụ ụbọchị m. Ọ hụrụ ya wee nwee obi ụtọ. ” Jisọs na -ekweta na o buru ụzọ dịrị n'ụzọ amụma. N'echiche nke Abraham buru ụzọ hụ ụbọchị ya. Isi ihe ga -enyere anyị aka ịghọta ihe Jizọs na -ekwu maka ya bụ Jọn 8:56. Ụkpụrụ Jọn bụ na mgbe Jizọs na -agwa ndị Juu okwu, ọ bụ n'ụzọ na -edoghị anya na nke na -akpali agụụ mmekọahụ, ndị Juu na -aghọtahie mgbe niile. Agbanyeghị, n'ihe gbara okwu a gburugburu, Jọn nyere nkọwa ụfọdụ maka ihe okwu ya pụtara.
(John 8: 56-58), tupu Abraham adị, a bụ m
53 Ị ka nna anyị Abraham, onye nwụrụ? Ndị amụma nwụkwara! Kedu onye ị na -eme onwe gị ka ị bụrụ? ” 54 Jisus zara, si,Ọ bụrụ na m na -enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na -enye m otuto, onye unu na -asị, 'Ọ bụ Chineke anyị.' 55 Ma unu amabeghị ya. Ama m ya. Ọ bụrụ na m asị na amaghị m ya, aga m abụ onye ụgha dị ka gị, mana amaara m ya ma na -edebe okwu ya. 56 Obi tọrọ nna unu Abraham ụtọ na ọ ga -ahụ ụbọchị m. Ọ hụrụ ya wee gladụrịa ọ .ụ." 57 Ya mere ndị Juu sịrị ya, “Ị kabeghị afọ iri ise, ị hụkwara Abraham?” 58 Jizọs sịrị ha, “N'ezie, n'ezie, asim unu, Mb Abrahame akāmughi Abraham Mu onwem di. "
“Tupu Abraham adị, a bụ m”, nkọwa REV
N'ezie ọ ga -ekwe omume, na Jizọs nwere n'uche ya amụma niile nke Mezaịa n'ime Agba Ochie, na Jizọs nọ n'uche Chineke ruo ọtụtụ puku afọ. Ịdị adị nke Kraịst n theuche Chineke pụtara nnọọ ìhè na ọ dịghị mkpa ịgbagha ya. Tupu a tọọ ntọala ụwa, e buru ụzọ mara ya (1 Pita 1:20); site na ntọ -ala nke ụwa ka e gburu ya (Mkpu. 13: 8); na tupu a tọọ ntọala ụwa, anyị, Ụka, bụ ndị a họpụtara n'ime ya (Ndị Efesọs 1: 4). Ihe doro anya banyere Mesaịa ahụ nke e kwuru n'amụma ndị e buru banyere ya na -egosi n'ụzọ doro anya na akụkụ niile nke ndụ ya na ọnwụ ya dị n'uche Chineke nke ọma tupu nke ọ bụla n'ime ha emee.
(Revised English Version (REV) Nkọwa Bible, https://www.revisedenglishversion.com/John/chapter8/58, ejiri ikike mee ihe, Mmekọrịta Mmụọ na Eziokwu)
Jọn 13:19 nwere nkwupụta '' ọzọ mgbe Jizọs kwuru '' mgbe ọ ga -eme, ị nwere ike kwere na m bụ. " Nke a na -esote Jọn 13: 17 ebe Jizọs na -ekwu na "Akwụkwọ Nsọ ga -emezu". N'ọnọdụ a, Jizọs na -ekwupụta na ndị na -eso ụzọ ya ga -ekwenye na ọ bụ ya ka e kwuru okwu ya n'Akwụkwọ Nsọ mgbe ihe o kwuru mezuru. Yabụ, Jizọs na Jọn 13:19 na -ekwusi ike na ọ bụ ya bụ onye e buru n'amụma n'Akwụkwọ Nsọ.
Jọn 13: 17-19 (NIV), ka mgbe ọ ga-eme, ka unu wee kwere na ọ bụ m bụ ya
17 Ọ bụrụ na ị maara ihe ndị a, ngọzi na -adịrị gị ma ọ bụrụ na ị na -eme ha. 18 Anaghị m ekwu banyere unu niile; Amaara m onye m họọrọ. Ma Akwụkwọ Nsọ ga -emezu, 'Onye riri achịcha m ebiliwo megide m.' 19 Ana m agwa gị nke a ugbu a, tupu ọ mee, na mgbe ọ ga -eme, unu nwere ike kwenye na ọ bụ m bụ ya.
Na Jọn 18: 4-8, Jizọs na-aza ndị nche na-achọ “Jizọs onye Nazaret.” Jizọs na -akọwa onwe ya naanị dị ka Jizọs onye Nazaret nke a jụrụ ugboro abụọ. Ndị nche na -ese azụ wee daa n'ala apụtaghị na Jizọs bụ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile. Amata Kraịst dị ka Jizọs onye Nazaret doro anya site n'ihe gbara ya gburugburu.
John 18: 4-8 (ESV), Jizọs onye Nazaret-abụ m ya
Ya mere Jisus, ebe Ọ matara ihe nile nābiakwasi Ya, Ọ bia, si ha, Whonye ka unu nāchọ? Ha zara ya sị, “Jizọs nke Nazaret. ” Jizọs sịrị ha, “Abụ m ya (ego eimi). ” Judas, onye nārara ya nye, n withguzo kwa n'etiti ha. Mgbe Jizọs gwara ha, “Abụ m ya (ego eimi) ”ha lara azụ wee daa n'ala. Ya mere ọ juru ha ọzọ, si, Whonye ka unu nāchọ? Ha wee sị, "Jizọs nke Nazaret. ” Jisus zara, si,Agwara m gị na ọ bụ m he (ego eimi). Ya mere, ọ bụrụ na ị na -achọ m, hapụ ndị a ka ha laa. ”
N'okpuru ebe a bụ amaokwu nke m bụ (ego eimi) nkwupụta nke Kraịst n'akwụkwọ Jọn. Ọdịiche zuru oke nke amaokwu ndị a na -egosi njirimara na ihe dị iche na nkwanye ùgwù maka otu Chineke na Nna.
John 4: 25-26 (ESV), Mezaịa na-abịa-abụ m ya (ego eimi)
Nwanyị ahụ sịrị ya, "Ama m na Mezaịa na -abịa (onye a na -akpọ Kraịst). Mgbe ọ bịara, ọ ga -agwa anyị ihe niile. ” Jisus siri ya, Mu onwem Nke nāgwa gi okwu ọ bụ ya (ego eimi). ”
(Jọn 6: 35-38) m (ego efu) achịcha ndụ
Jizọs sịrị ha, “m (ego efu) achịcha ndụ; onye ọ bula nke nābiakutem, agu agaghi -agu ya: onye ọ bula nke kwere na Mu, akpiri agaghi -akpọ ya nku ma -ọli. Ma asim unu, na unu ahuwom, ma unu ekweghi. Ihe niile Nna na -enye m ga -abịakwute m, onye ọ bụla bịakwutere m agaghị m achụpụ ya. N'ihi na esiwo m n'eluigwe bịa, ka m ghara ime uche nke m, kama uche onye zitere m.
(Jọn 6: 41-58) m (ego efu) achịcha ndụ
Ya mere ndị Juu tamuru ntamu megide ya, n'ihi na ọ sịrị,m (ego efu) achicha nke si n'eluigwe gbadata. ” Ha sịrị, “Onye a ọ́ bụghị Jizọs, nwa Josef, onye anyị maara nna na nne ya? Oleezi otú ọ na -asị, 'Esi m n'eluigwe bịa'? ” Jizọs zara ha, sị: “Unu atamula n'etiti onwe unu. Ọ dịghị onye nwere ike ịbịakwute m ọ gwụla ma Nna zitere m dọtara ya. M ga -akpọlitekwa ya n’ọnwụ n’ụbọchị ikpeazụ. Edewo ya n'akwukwọ ndi -amuma, 'Ha niile ga -abụkwa ndị Chineke kụziiri ihe.' Onye ọ bụla nụrụ na mụtara site na Nna na -abịakwute m- ọ bụghị na onye ọ bụla ahụla Nna m ma e wezụga onye ahụ nke sitere na Chineke. ọ hụwo Nna m. N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, onye ọ bụla nke kwere nwere ndụ ebighi ebi. m (ego efu) achịcha ndụ. Nna nna gị hà riri nri mana n'ọzara, ha wee nwụọ. Nke a bụ achịcha na -esi n'eluigwe agbadatan, ka mmadụ wee rie ya wee ghara ịnwụ. m (ego efu) achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe gbadata. Ọ bụrụ na onye ọ bụla erie achịcha a, ọ ga -adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha m ga -enye maka ndụ nke ụwa bụ anụ ahụ m. ”
52Ya mere ndị Juu na -arụrịta ụka n'etiti onwe ha, sị, "Olee otu nwoke a ga -esi nye anyị anụ ya ka anyị rie?" Ya mere Jisus siri ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, ọ gwụla ma unu riri anụ Nwa nke Mmadu drinkụọkwa ọbara ya, unu enweghị ndụ n'ime unu. Onye ọ bụla nke na -eri anụ ahụ m ma na -a drinksụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi, m ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na anụ ahụ m bụ ezi nri, ọbara m bụkwa ezi ihe ọ drinkụ drinkụ. Onye ọ bụla nke na -eri anụ ahụ́ m ma na -a drinksụ ọbara m na -anọgide n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya. Dị ka Nna dị ndụ zitere m, m dịkwa ndụ n'ihi Nna m, ya mere, onye na -eri m, onye ahụ ga -adịkwa ndụ n'ihi m. Nke a bụ achịcha nke si n'eluigwe rịdata, ọ bụghị dị ka achịcha nna nna ha riri wee nwụọ. Onye ọ bụla riri achịcha a ga -adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. ”
(Jọn 8: 12-18) m (ego efu) ìhè nke uwa
Ọzọ, Jisus gwara ha okwu ọzọ, si, “Abụ m (ego efu) ìhè nke uwa. Onye ọ bụla nke na -eso m agaghị eje ije n'ọchịchịrị, kama ọ ga -enwe ìhè nke ndụ. ” Ya mere ndi -Farisi siri Ya, Gi onwe -gi nāb witnessara Onwe -gi àmà; àmà gị abụghị eziokwu. ” Jisus zara, si, Ọ buru kwa na Mu onwem ab aboutara Onwem àmà, àmà nkem bu ezie; n'ihi na amataram ebe M'siri bia, na ebe M'nāla; Ị na -ekpe ikpe dịka anụ ahụ si dị; Anaghị m ekpe onye ọ bụla ikpe. Ma ọ bụrụgodi na m ekpee ikpe, ikpe m bụ eziokwu, n'ihi na ọ bụghị naanị m na -ekpe ikpe, kama ọ bụ m Nna nke zitere m. N'Iwu gị ka edere ya na ịgba akaebe nke mmadụ abụọ bụ eziokwu. m (ego eimi) onye na -agba ama gbasara onwe m, na Nna nke zitere m na -agba ama banyere m. "
(Jọn 10: 7-11) m (ego efu) ọnụ ụzọ atụrụ
Ya mere Jisus siri ha ọzọ, N'ezie, n'ezie, asim unu, m (ego efu) ọnụ ụzọ atụrụ. Ndị niile bịara n'ihu m bụ ndị ohi na ndị na -apụnara mmadụ ihe, mana atụrụ egeghị ha ntị. m (ego efu) ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla esi na mụ abanye, a ga -azọpụta ya, ọ ga -abanyekwa na ya wee chọta ebe ịta nri. Onye ohi na -abịa naanị ka o zuo ohi ma gbuo ma bibie. Abịara m ka ha nwee ndụ wee nwee ya n'ụba. m (ego efu) onye ọzụzụ atụrụ ọma. Ezigbo onye ọzụzụ atụrụ na -atọgbọ ndụ ya maka atụrụ ya.
(Jọn 10: 14-17) m (ego efu) onye ọzụzụ atụrụ ọma
“Abụ m (ego efu) onye ọzụzụ atụrụ ọma. Amaara m nke m ma nke m mara m, dị nnọọ ka Nna m maara m, mụ onwe m amatakwa Nna m; m na -atọgbọkwa ndụ m n'ihi atụrụ. Enwere m atụrụ ọzọ na -anọghị n'ogige atụrụ a. Aghaghị m ịkpọta ha, ha ga -egekwa ntị n'olu m. N'ihi ya, a ga -enwe otu ìgwè atụrụ, otu onye ọzụzụ atụrụ. N'ihi nke a Nna hụrụ m n'anya, n'ihi na ana m atọgbọ ndụ m ka m wee nweta ya ọzọ.
(Jọn 11: 25-27) m (ego efu) mbilite n'ọnwụ na ndụ
Jizọs sịrị ya, "m (ego efu) mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọ bụla nke kwere na m, ọ bụrụgodị na ọ nwụọ, ọ ga -adị ndụ ọzọ; onye ọ bụla nke dị ndụ ma nwee okwukwe na m agaghị anwụ anwụ. Ị kwere nke a? ” Ọ si ya, E, Onye -nwe -ayi; Ekwenyere m nke ahụ ị bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, onye na -abịa n'ụwa. "
(Jọn 14: 1-6) m (ego efu) ụzọ, na eziokwu, na ndụ
“Ka obi ghara ịlọ unu mmiri. Kwere na Chineke; kwerenụ na m. Na ụlọ Nna m nwere ọtụtụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, m gaara asị gị na m na -aga ịkwadebere gị ebe? Ọ bụrụkwa na mụ agaa kwadebere unu ebe, aga m abịa ọzọ were kpọrọ unu nye onwe m, ka unu wee nọrọkwa ebe m nọ. Ị makwa ụzọ ebe m na -aga. ” Tọmọs sịrị ya, “Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na -aga. Àyi g cansi a wea mara uzọ? m (ego efu) ụzọ, na eziokwu, na ndụ. Ọ dịghị onye na -abịa to Nna ma ewezuga site na m. "
(Jọn 15: 1-10) m (ego efu) ezi osisi vaịn, ọ bụkwa Nna m bụ onye ọrụ ubi vaịn
"m (ego efu) ezi osisi vaịn, ọ bụkwa Nna m bụ onye ọrụ ubi vaịn. Alaka ọ bụla dị n'ime m nke na -adịghị amị mkpụrụ ọ na -ewepụ, na alaka ọ bụla na -amị mkpụrụ ọ na -akwacha, ka o wee na -amịkwu mkpụrụ. Ị dị ọcha ugbu a n'ihi okwu m gwara gị. Nọgidenụ n'ime m, mụ onwe m n'ime unu. Dị ka alaka enweghị ike ịmị mkpụrụ n'onwe ya, ọ gwụla ma ọ na -ebi n'ime osisi vaịn, gị onwe gị enweghị ike, ọ gwụla ma ị na -ebi n'ime m. m (ego efu) osisi vaịn ahụ; unu bụ ẹka. Onye ọ bụla nke na -anọgide n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya, ọ bụ ya na -amị mkpụrụ dị ukwuu; Ọ bụrụ na onye ọ bụla anọgideghị n'ime m, a na -atụpụ ya dị ka alaka wee kpọnwụọ; a na -achịkọtakwa alaka ya, tụba ya n'ime ọkụ wee kpọọ ya ọkụ. Ọ bụrụ na unu anọgide n'ime m, okwu m na -anọgidekwa n'ime unu, jụọ ihe ọ bụla masịrị gị, a ga -emere gị ya. Site na nke a a na -enye Nna m otuto, ka unu na -amị mkpụrụ dị ukwuu wee bụrụ ndị na -eso ụzọ m. Dị ka Nna m hụworo m n'anya, mụ onwe m hụkwara unu n'anya. Nọgide n'ịhụnanya m. 10 Ọ buru na unu edebe ihe nile M'nyere n'iwu, unu gānọgide n'ihu -n'anyam; dị nnọọ ka m debere ihe Nna m nyere n'iwu wee nọrọ n'ịhụnanya ya.
Ozizi Atọ n'Ime Otu site n'echiche nke ịdị n'otu
Nye Bụ Chineke?
pdf nbudata: https://focusonthekingdom.org/Who%20Is%20God.pdf